Home » Editor's Notes » အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း ( Dual Citizenship ) – ဇူလိုင် ၂၀၁၆
ယာရာတိုလာ မာမူခိုင်ရဲ့ အကြံပေးချက်အား
တလောက မြန်မာပြည်သွား.. လွှတ်တော်၂ရပ်နဲ့တွေ့.. ၀န်ကြီးများအပါအ၀င်အရာရှိကြီးတချို့တွေနဲ့သွားတွေ့.. တပ်မတော်သားကြီးတချို့နဲ့တွေတာ.. ဘာများသွားလုပ်တယ်ထင်ပါသလဲ.. အရီးလတ်ရေ…။
ဘယ်တုန်းကများ ဗီယက်နမ်က Dual Citizenship ခွင့်ပြုလိုက်သလဲမသိ။ ဟုတ်မှလုပ်ပါ သူကြီးရယ်..။
Possibly. Vietnam allows dual nationality if certain situations apply.
orde216 8 points9months ago
This is outdated info. Dual is possible now.
tunalastic3points9months ago
Can confirm, this is outdated information.
ဗီယက်နမ်က ပူးတွဲနိုင်ငံသားခွင့်ပြုစာရင်းထဲ ပါနေလို့တင်လိုက်တာပါ..။
ယူအက်စ်မှာက.. ယူအက်စ်မြေပေါ်မှာ ဘယ်နိုင်ငံသား၊ဘယ်သူက ကလေးလာမွေးမွေး.. အဲဒီကလေးက.. အမေရိကန်စစ်စစ်တဲ့..။
သဂျီးရယ် . . . လူများစုဖြစ်တဲ့ အခြေခံလူတန်းစားတွေအဖို့တော့ Dual citizenship ပေးမယ်လို့ ကြားလို့ မျိုးနှစ်တွေက ကုလပြည်ဖြစ်တော့မယ်လို့ သွေးထိုးလိုက်တာနဲ့ သို့လောသို့လောတွေ ဖြစ်ကုန်ကြပါအူးမယ် . . . education လေး တက်လာတာကို စောင့်လိုက်ပါဦး
ပုဒ်မ (၇)၊ ပုဒ်မခွဲ (ဃ) (င) (စ) များအရ ဧည့်နိုင်ငံသားနဲ့ နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူများဟာ ၎င်းတို့ရဲ့ သက်တမ်းအတွင်းမှာ “နိုင်ငံသား” ဖြစ်လာခွင့်မရှိ၊ ၎င်းတို့ရဲ့ ဒုတိယမျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ သား၊သမီးများမှာလည်း “နိုင်ငံသား” ဖြစ်ခွင့်မရှိပဲ၊ ၎င်းတို့ရဲ့ တတိယမျိုးဆက်၊ မြေးများကျမှသာ “နိုင်ငံသား” ဖြစ်ခွင့်ရှိပါတယ်၊
ဥပဒေအရ နိုင်ငံခြားသားများကို နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်လုံးဝပေးမထား၊ ပုဒ်မ (၇၂) အရ မည်သည့် နိုင်ငံခြားသားမျှ “နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရရန်” လျှောက်ထားခွင့်မရှိစေရဟု ပြဋ္ဌန်းထားပါသည်။
မဘသ များကအရင်ဆုံးကန့်ကွက်ပါလိမ့်မယ်သူကြီးရေ
မြန်မာလူမျိုးက.. မြန်မာနိုင်ငံသား(ပြန်) ဖြစ်ပြီး.. မြန်မာဥပဒေအောက်ဝင်လာတာကို.. ဘာကိုကန့်ကွက်ကြမှာလည်းလို့.. သိချင်တာ..။
ကျန်တာ အတွက် သူတို့ (အလီဘာဘာများ နှင့် သူတို့ ၏ လက်ကိုင်ဒုတ်အမျိုးစောင့်များ) ဉာဏ်မမှီပါဘူး။
Dual citizenship ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ဖူးသူ မြန်မာများအတွက် သီးသန့်ဆိုပြီး ထုတ်လို့ရသလား သဂျီး . . .
အမေရိကားက မြန်မာနဲ့ ဒီက မြန်မာမလေးတို့ ကြိုက်ပြီး ဟိုက ဒီလာပြီး ဒီမှာ လက်ထပ်ကြတယ်။ ပြီးမှ ဟိုကို ခေါ်သွားကြတယ်။ အဲဒီဖြစ်စဉ်မျိုးလေးတွေထဲမှာ အကျိုးအပေါက်တွေ ရှိတယ်။ အမေရိကားက ကောင်ကို လက်ထပ်ပြီးရင် ဟိုကို လိုက်လို့ မရဘူးဆိုတာ ရှိကိုမရှိဘူးတဲ့။ ၆ လကနေ ၂ နှစ် အတွင်း စာရွက်စာတမ်းကိစ္စပြီးတာပဲ။ လိုက်လို့ ရကို ရတယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် လိုက်မရတဲ့ အဖြစ်ကလေးတွေ ရှိပြီဆိုရင် အဲဒါ အဲဒီမြန်မာမလေး နံပါတ်ချိတ်သွားပြီလို့ သဘောပေါက်ကြရတယ်။ အဲဒီလို နံပါတ်ချိတ်သွားတဲ့ မိန်းကလေးတွေ အရေအတွက် မများလှပေမယ့် ရှိတော့ရှိနေတယ်။ တကယ်လို့သာ Dual citizenship လုပ်လိုက်ရင် အဲဒီမှာ ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ။ မြန်မာယောက်ျားက ဟိုမှာတစ်ယောက် ဒီမှာတစ်ယောက် ယူလို့ ရနေမလား။ ဒါမှ မဟုတ် အဲဒီဇာတ်မျိုး ဆက်ကလို့ မရဘဲ ဖြစ်သွားမလား။
ဆိုတော့… အနည်းဆုံးတော့.. ၂ယောက်.. ဆိုင်ရာ ၂နိုင်ငံမှာ ယူလို့မရ.. …အရှုံးတော့ပေါ်သွားသတည်းပေါ့လေ…။
စကားအတင်းစပ်ပြောရရင်.. ယူအက်စ်စစ်ဒဇင်က.. ကမ္ဘာ့ဘယ်နိုင်ငံမှာနေနေ… အခွန်တော့ ဆောင်ရသမို့.. ( ကမ္ဘာမှာ ၂နိုင်ငံပဲရှိ) … မြန်မာပြည်မှာ သွားနေနေပြီး အလုပ်လုပ်နေရင်… မြန်မာနိုင်ငံကိုလည်းအခွန်ဆောင်… အမေရိကနိုင်ငံကိုလည်းအခွန်ဆောင်…
ဒီလိုဆိုရင် မဖြစ်ဘူး။ သ၈ျီး။ မြန်မာပြည်လာပြီး စီးပွားရှာ။ ၀င်ငွေခွန် သူတို့ နိုင်ငံမှာဆောင် ဆိုရင် မဖြစ်ဘူး။ သူတို့နိုင်ငံမှာ စီးပွားရှာ။ ၀င်ငွေခွန်ကို မြန်မာပြည်မှာဆောင် ဆိုရင် မဆိုးဘူး။